MARTISOOR: Eng. Maxamuud Axmed Xasan ‘Dhegoweyne’ waayaha dalka iyo isbaddalka Geeska Afrika (dhegayso) – Radio Daljir
MARTISOOR: Eng. Maxamuud Axmed Xasan ‘Dhegoweyne’ waayaha dalka iyo isbaddalka Geeska Afrika (dhegayso)
Seteembar 20, 2018 2:13 g 0
Barnaamijka Martisoor ee Radio Daljir waxaa todobaadkan marti u ah Eng. Maxamuud Axmed Xassan “Dhegoweyne” oo kamid ah aqoonyahanka Puntland ee deggan dalka Imaaraadka Carabta ahna qareen inta badan u dooda danaha qaran ee dalkeena Soomaaliya.
Waxaana Engineerku uu barnaamijkan si durugsan ugu falanqaynayaa arrimo ay ka mid yihiin xiisadda siyaasadeed ee ka dhextaagan dawladda FS iyo dawladaha xubnaha ka ah, isbaddalka xawliga ah ee ka socda gobolka Geeska Afrika iyo doorka ay Soomaliya ku leedahay isbaddalkaas.
Intaas oo kaliya ma aha ee Eng. Dhegoweyne waxa uu ka hadlayaa marxaladda kala guurka ah ee uu wajahayo maamulka Puntland siiba xiiisadda goolka Sool, xulista baarlamaanka cusub ee Puntland, xuuraanka la xirriira sida ay xalaal ku noqon karto doorasho lacagi hormuud ka tahay iyo ammuuro kale oo siyaasadeed oo maanta taagan.
MARTISOOR 73 Wararka 24372
Madaxweyne Gaas oo kormeeray xarumaha dowladda ee Badhan (sawirro)
Golaha Wasiirada Puntland oo ku shiray magaalada Badhan ee xarunta maamulka Sanaag